HGH scammers - Olee otú ị zere ịghọ aghụghọ a merụrụ ahụ?
Nhazi na ọrụ nke saịtị ojoro
Ejiri "ngwa ngwa" - ebumnuche nke saịtị ọ bụghị ọkachamara, nwere otu ibe, saịtị ahụ ejedebeghị na ọrụ. Ndị ọkachamara anaghị etinye oge na nhazi na ibe nke saịtị otu ụbọchị, n'ihi na ha ghọtara na saịtị ha n'oge ọ bụla nwere ike mechie ka ngwa ngwa mee ebe ọhụrụ
Ndị ana-akpọ na nzaghachi
Enweghị nọmba ekwentị na saịtị, ụdị nzaghachi ma ọ bụ site na nọmba ekwentị ọ dịghị onye na-aza. Ndị Scammers anaghị egosi nọmba ekwentị (ma ọ bụ gosi ndị ọzọ) anaghị aza oku ekwentị ha
Ndị na-ekiri ihe na-emekarị na-akwụ ụgwọ ntanetị. Ndị Scammers anaghị eji usoro ịkwụ ụgwọ ntanetịime iwu, dị ka nnyefe ego, ịkwụ ụgwọ site na ego, ebe ị nwere ike ịhụ aha payee
Ndị ọkachamara anaghị eji ozi ezigara na ego - n'ihi enweghị ngwongwo
Gbalịa ịchọta adreesị ụlọ ọrụ ahụ na saịtị ma ọ bụ na Google Maps
Ọnụ ala na ezigbo ọnọdụ nke nnyefe, ndị ọfụfụ n'ụzọ ọ bụla na-anwa ime ka ị kwenye na ọnụ ala na ngwa ngwa ngwa ngwa
Na saịtị enweghị ozi gbasara ọnọdụ nloghachi, ịkwụ ụgwọ na ndị ọzọ dị ka
amụma nzuzo , Usoro nke ọrụ , nkwụghachi iwu
Gụọ akụkọ site n'aka ndị ọbịa ndị ọzọ, lee ihe
Ndị na-eme ihe nkiri na ebe nrụọrụ weebụ
Ndị na-ere ahịa na ebe nchekwa data na ndị na-ere ọgwụ na hormone na ndị ọzọ na-akwadoghị ọgwụ
Nna Bob, anyi nwere ndi eziga ozi na Bangkok na ugwo ego, i nwere ike mepee igbe, lelee kr codes, ihe obula iji jide n'aka
Kedu ka esi jide n'aka ihe ị na-ere ezigbo european genotropin si Pfizer ??? ma ọ bụ na ọ bụghị ihe a na-etinye n'ime mmiri?